Boqolaal askari oo dowladda Soomaaliya ay u dirtay Eritrea si ay tababar ugu qaataan ayaa kaqeyb qaatay dagaalka Tigreega, sida uu sheegay mudane Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday
Wuxuu sheegay in lala xiriiray oo uu xaqiijiyay in 3,000 oo dhalinyaro ah la tababaray, 180 dhaawac ah.
Waxaa ila soo xiriiray ehello iyo asxaab badan, sanad ka horna caruurtooda waxaa loo qaaday Eriteriya si ay u helaan nolol iyo geeri. waxaa bartiisa ku soo qoray Xidhibaanka Baarlamaanka Soomaaliya.
“Mid kamid ah caruurta oo maalmo kahor laxidhiidhay eheladiisa ayaa sheegay in lageeyay magaalada Mekele ee gobolka Tigree uuna kaqeyb qaatay dagaalada wuxuuna sheegay inay jiraan 3000 oo qof uuna arkay 180 dhaawac ah. ” Xildhibaan Mahad Salaad.
Mahad Salaad oo wax laga xumaado ku tilmaamay ka qeyb qaadashada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dagaalka waqooyiga Itoobiya ayaa ugu baaqay musharixiinta mucaaradka, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta inay caawiyaan waalidiinta caruurtooda ka maqan. Kaliya nolosha iyo dhimashada.
“Waa musiibo iyo masiibo qoysaskii ay ka dhasheen dadkii caruurtooda lagu xasuuqay dagaalkii Itoobiya, waxaan ugu baaqayaa musharixiinta, xildhibaanada baarlamaanka Federaalka iyo siyaasiyiinta inay caawiyaan waalidiinta caruurtan oo ay helaan caruurtooda oo nool oo bad qaba! ” Ayuu yidhi.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ciidamo qaab qarsoodi ah ugu dirtay dalka Eriteriya ayaan wali ka jawaabin warbixinada isa soo taraya iyo walwalka ay qabaan waalidiinta caruurtooda aan la hayn meel ay joogaan muddo lix bilood ah, iyadoo hay’adda sirdoonka qaranka ee (NISA) ay maamusho keenista ciidamadan. loo diray Ereteriya sida ay xaqiijiyeen ilo dhinaca amniga ah.
Sababta ka dambeysa tirada cajiibka ah ee uu leeyahay